လင်ငယ်လည်းနေသေးတယ်။ လင်ငယ်ရှေ့မှာ လင်ကြီးကိုပြောဆိုနေလိုက်တာဗျာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ တကယ်ရှိတယ်ဗျာ(ရုပ်သံ)
လင်ငယ်လည်းနေသေးတယ်။ လင်ငယ်ရှေ့မှာ လင်ကြီးကိုပြောဆိုနေလိုက်တာဗျာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ တကယ်ရှိတယ်ဗျာ(ရုပ်သံ) ထိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာစုံတွဲလို့ သိရပါတယ်။ ဒီလောက်တောင်လားဗျာ။ လင်ငယ်လည်းနေသေးတယ် သူကပဲ လင်ကြီးကို ပေါ်တင်ဒဲ့ကြီးဟောက်နေသေးတယ်။ ကြောက်စရာပါလားဗျာ။ အရှက်တရားတို့ ဂုဏ်သိက္ခာတို့ လင်နဲ့မယားအပြန်အလှန် လေးစားယုံကြည်မှုတို့ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲဗျာ။ လင်ကြီးဖြစ်သူကလည်း အေးတိအေးစက်နဲ့ဗျာ ကိုယ့်မိန်းမက ပေါ်တင်ကြီး လင်င […]
Myanmar Idol မှ သူမ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ City Loft တိုကျခနျးကယျြကွီးကို ပရိသတျတှဆေီ ခပြွလာတဲ့ အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျ
ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်က Myanmar Idol Season (4) ရဲ့ Winner တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သူလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ အက်စတာက Myanmar Idol မှ Winner ဆုကြေးငွေ သိန်း (၇၀၀)နဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ Solo Album တစ်ခွေ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ကြှနျမရဲ့ အမြိုးသားက ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ ရာထူးခပျကွီးကွီးနဲ့ လုပျကိုငျနတေဲ့ လူတဈယောကျဖွဈပွီး ၊ သူဟာ အမွဲတမျး အလုပျကိစ်စနဲ့နိုငျငံခွားကို မကွာခဏသှားလရှေိ့ပါတယျ။ ရနျကုနျမှာရှိနတေဲ့ နတေ့ျောတျောမြားမြားမှာလညျး ညတိုငျးလိုလို ဧညျ့ခံပှဲတှနေဲ့ အလုပျရှုပျနတေတျပါတယျ။ ကြှနျမတို့ အိမျတောငျကခြဲ့တာ တဈနှဈကြျောလောကျမှာ ကြှနျမတို့မှာ သားလေးတဈယောကျ ရလာပွီးတဲ့ နောကျပိုငျးမှာ အမြိုးသားရဲ့ အလုပျက […]
လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်..
အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း၌ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် နေပြည်တော် ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ Community Based Facility Quarantine ဖွင့်လှစ်ထား သည့် ကျောင်းများအားလုံး ပြန်လည်အပ်နှံရေးညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ကို အစိုးရမှ ယခုလ ၁၃ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်…။ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် Quarantine ၀င်နေသူများမှလွဲပြီး […]
“နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း”.
“နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်း” ” ခွဲစိတ်ရင် (၁၀) သိန်းအထက် ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြား မှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း “ နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် […]
စည်းမစောင့်ပဲ အပျော်ကြူးတဲ့စုံတွဲတချို့ကြောင့် လူမမည် ကလေးငယ် ဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ ရုပ်သံ.
ယင်းသို့ ရွေးချယ်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် အတွက် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့ရှိ လူကြိုက်များသော တက္ကသိုလ်များနှင့် အမှတ်မြင့်သော တက္ကသိုလ်များ၏ ဝင်ခွင့်များကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၏ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်မှုဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းအလိုက် ဝင်ခွင့်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခချုပ်များက ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်..။ “တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကတော့ လက်ရှိမှာ ဆွေးနွေးနေဆဲပဲ။ ဘယ်ကျောင်းတွေက […]
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဖြစ် ရောက်ရှိတော့မည့် မုန်တိုင်းငယ်နှင့် ယနေ့ မိုးလေဝသ အခြေအနေ.
ဆိုင် ကလုန်းမု န်တိုင်းအဖြစ် ရောက် ရှိတော့မည့် မုန် တိုင်းငယ်နှင့် ယနေ့ မိုးလေဝသ အခြေအနေ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်း တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၊ (၁၅.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မုန်တိုင်းငယ် (Depression) အဆင့်သို့လည်းကောင်း၊ (၁၆.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် […]
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်​ (ဗီဒီယိုဖိုင်​)အွန်​လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ရွှေနှစ်တောရ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက် ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ထူးခြား video ရုပ်သံ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်… စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ရွှေနှစ်တောရမှာ အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ video ပါ.. unicode စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ဗနျးမောကျမွို့နယျ၊ရှနှေဈတောရ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ဆှမျးအလှူခံကွှလမျးမပျေါတှငျအသကျမဲ့နှယျရှငျလမျးလြှောကျ… ဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ဆှမျးအလှူခံကွှလမျးမပျေါတှငျအသကျမဲ့နှယျရှငျလမျးလြှောကျနတေဲ့ ထူးခွား video ရုပျသံ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး […]